Maraakiib Imaaraadka laga leeyahay "oo la weeraray" - BBC News Somali
Maraakiib Imaaraadka laga leeyahay "oo la weeraray"
Afar markab oo ganacsi ah ayaa ayaa lagu qaaday "weerar lagu minjaxaabinayo" iyaga oo maraya meel u dhaw biyo xadeedka Isutagga Imaaraadka Carabta, sida ay sheegtay wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Imaaraadka.
Weerarkan la sheegay ayaa ka dhacay Gacanka Cumaan, sida lagu xusay warka Imaaraadka ka soo baxay, balse wasaaraddu ma aysan faahfaahin qaabka uu weerarkaasi u dhacay.
Ma jirto cid ku dhimatay ama ku dhaawacantay.
Masar oo sheegtay in xiisadda Khaliijka lagu xalin karo uun Qadar oo shuruudahooga fulisa
Ma ogyahay Maraykanku dadka aan waxba galabsan ee duqaymaha uu ku fuliyo Soomaaliya ay galaaftaan?
Maraykanka oo qabtay markab ay leedahay Kuuriyada Waqooyi
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Imaaraadka ayaa isku dayga weerarkan minjo xaabinta ah ku tilmaantay "halis soo korodhay" beesha caalamka ayayna ugu baaqday "in ay ka hor tagto ficilo noocaas oo kale ah" oo mustaqbalka dhaca.
Horraantii Axaddiina madaxda magaalada Fujairah ee dalka Imaaraadka ayaa diiday warar ay saxaafaddu qortay oo sheegay in uu qarax ka dhacay dakadda.
Weerarkan Imaaraadka ka soo yeeray ayaase imaanaya iyadoo ay cirka isku sii shareerayso xiisadda u dhaxaysa Iiraan oo ay daris yihiin iyo dalka Maraykanka oo toddobaadkan geeyay maraakiib dagaal oo uu ugu yeeray "tilmaan dhab ah oo muujinaysa" halista ciidammada Maraykanka ee gobolkaas ku sugan kaga imanaysa dhanka Iiraan.